Raharaha volamena atsy Afrika Atsimo: tale iray indray nahazo LP amin’ilay «73, 5kg» | NewsMada
Raharaha volamena atsy Afrika Atsimo: tale iray indray nahazo LP amin’ilay «73, 5kg»
Misoko mangina sy tsy re tsaika hatrany ny didim-pitsarana momba ilay volamena 73,5kg naondrana an-tsokosoko atsy Afrika Atsimo. Nahazo fahafahana vonjimaika (LP) indray koa ny iray amin’ireo ahina ho mpiray tendro amin’ity raharaha iray ity, herinandro vitsy lasa izay. Tale iray tao amin’ilay kaompaniam-pitaterana ana habakabaka tsy miankina “Services et transports aériens – STA”, tompon’ny fiaramanidina niondranan’ireo olona telo nitondra ny volamena 73,5kg, nihazo an’i Johannesbourg io nahazo LP io. Nohazonina vonjimaika teny Tsiafahy ny tenany ary izao efa nivoaka izao raha mbola anisan’ireo tavela eny amin’io fonjabe io kosa ireo mpanamory roa lahy nitondra ny fiaramanidina.
Telo ireo nahazo LP
Tafakatra telo izany izao ireo nahazo LP amin’ity raharaha ity. Anisan’izany ilay mpanosika fiarakely mpitondra entana eny amin’ny seranam-piaramanidina. Voalaza fa tsy anisan’ny voasaringotra mivantana amin’ny fanondranana an-tsokosoko ilay harem-pirenena io lehilahy io. Anisan’ny efa nahazo LP koa ny tale jeneralin’ny ACM, teo aloha.
Ankoatra izany, efa eto Madagasikara ilay vazaha tompon’ny orinasa STA, rehefa nialokaloka tatsy amin’ny Nosy rahavavy. Miisa 10 izany izao ireo mbola tazonina am-ponja vonjimaika (MD) amin’ity raharaha volamena 73,5kg ity. Na izany aza, tsy mbola mifarana ny fanadihadiana.
Maromaro ireo ahina sy atidoha nikotrika
Mbola maro ireo olona ahina ho ao ambadik’ity fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena ity. “Manampy izany ny fiandrasana ny fanapahan-kevitra amin’ny famaliana ny fangatahana ny fampodiana ireo teratany malagasy telo lahy, tazonin’ny fitsarana afrikanina tatsimo any aminy”, hoy ihany ny eo anivon’ny Pac.
Tsiahivina fa tranga niseho ny 31 desambra 2020 ity fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena any Afrika Atsimo ity. Tsy mbola vita ny fitsarana ary ilay volamena koa tsy mbola tafaverina an-tanindrazana. Mbola tazonin’ny fitsarana afrikanina tatsimo kosa ireo teratany malagasy telo lahy, nitondra izany volamena izany.